News - Basic Ihe Ọmụma nke Iburu
You ma ihe akụkụ igwe biarin bụ? A na-akpọ ha "nri nke ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ igwe" ma jiri ya mee ihe n'ọtụtụ akụkụ dị mkpa nke igwe. N'ihi na akụkụ ndị a dị mkpa na-arụ ọrụ n'ebe a na-adịghị ahụ anya, ndị na-abụghị ndị ọkachamara anaghị aghọta ha. Ọtụtụ ndị ọkachamara na-abụghị ndị na-arụ ọrụ n'ibu amaghị ihe ebu.
Gịnị bụ agba?
Usoro nhazi bụ akụkụ na-enyere ihe aka ịtụgharị, nke a maara na Japanese dị ka jikuke Dị ka aha ya pụtara, iburu bụ akụkụ nke na-akwado ntụgharị "ntụgharị" na igwe.
Igwe eji ihe eji eme ihe bu ugbo ala, ugbo elu, igwe na ihe ndi ozo. A na-ejikwa ihe ndi ozo dika ngwa nju ulo, ndi na-ekpocha ihe na ikuku.
N'ime igwe ndị a, biarin na-akwado “ogwe” ahụ nwere wiil ndị ebuliri elu, gia, turbines, rotors na akụkụ ndị ọzọ iji nyere ya aka ịtụgharị nke ọma.
Dika igwe di iche iche iji jiri otutu uzo na emeghari ya, ya mere ihe omuma a aburu ihe di nkpa, nke amara dika "ihe eji eme ihe eji emeputa ihe." Akụkụ a nwere ike iyi ihe na-adịghị mkpa, mana ọ dị mkpa. Na-enweghị ya, anyị nwere ike ' bie ndu kwesiri.
Belata esemokwu ma mee ka ntụgharị dịwanye ike
A ga-enwerịrị esemokwu n'etiti "ogwe" ahụ na-atụgharị ya na onye na-akwado ya na-agbagharị. Ejiri agba dị n'etiti "ogwe" ntụgharị na akụkụ nkwado na-agbagharị.
Nta nwere ike belata esemokwu, mee ka ntụgharị gbanwee ma belata ike oriri. Nke a bụ ọrụ kasịnụ nke ibu.
Chebe akụkụ nkwado ndị na-agbagharị ma debe "axis" ahụ na-agbanwe agbanwe
Enwere ike dị ukwuu n'etiti "ogwe" ntụgharị na akụkụ nkwado na-agbagharị. Nrụgide ahụ na-egbochi onye nkwado na-agbagharị agbagha site na ike a mebiri emebi ma mee ka "ogwe" ahụ na-agbagharị na ọnọdụ kwesịrị ekwesị.
Ọ bụ kpomkwem n'ihi ọrụ ndị a nke na-amị na anyị nwere ike iwerekwa igwe a ruo ogologo oge.
Post oge: Ọgọstụ-22-2020